Fetifety eny "ambany tanàna" : Tovovavy 618 no voaolana -
AccueilRaharaham-pirenenaFetifety eny « ambany tanàna » : Tovovavy 618 no voaolana
21/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tafakatra 618 isa ireo vehivavy sy zatovavy niharan’ny herisetra ara-nofo teto an-drenivohitra ny taona 2016, nahitana fihenana izy io raha noharina tamin’ny taona 2015, izay nahitana tranga 655. Ny 90 isan-jaton’ireo dia latsaka ny 18 taona avokoa raha 11 volana no zandriny indrindra. Araka ny vaovao voaray avy eny amin’ny Akany Vonjy Befelatanana, ireo ankizivavy monina eny ambany tanàna no tena lasibatra amin’izany ary ireo mpiray vodirindrina ihany no tena tompon’antoka. Fantatra ihany koa, fa rehefa aorian’ny lanonana na faran’ny herinandro no tena betsaka lasibatra. Fa ny tena loza, nitondra vohoka tsy niriana avokoa ny 77 amin’ireo vehivavy ireo ary miisa 6 kosa ny tratran’ny aretina avy amin’ny firaisana ara-nofo. Miisa 165 kosa ireo tratran’ny fikorontanana ara-tsaina.
Ny ankamaroan’ireo vehivavy 618 ireo dia saika ny mpiray vodirindrina aminy no nanolana azy. Vitsy dia vitsy no naolan’ny sipany na sakaizany, araka ny fanadihadiana natao.
Ny tena mampalahelo anefa dia tsy misy hitarainana ireo lasibatra ireo satria matetika dia hanaovan’ireo mpanolana antsojay na menatra ihany koa ny tranga mahazo noho ny henatra ny fiarahamonina. Ary izay no antom-pisian’ny Akany Vonjy. Ity farany dia toerana ahazoan’ireo izay hiharan’ny herisetra ara-nofo mandray fanampiana manoloana ny olana mahazo azy ireo. Efa misy ny pôlisy miasa, miaraka amin’ny mpitsabo sy ny “Assistante sociale”. “Tanjona ny hahavitana ny fikarakarana rehetra eo anivon’ity hopitaly ity, manomboka amin’ny fitsaboana izany ka hatramin’ny fandefasana ny antontan-taratasy eny anivon’ny Fitsarana”, hoy ny fanazavana avy amin’ny sampandraharahan’ny Unicef.
Marihina fa niditra am-ponja avokoa izay notoriana rehetra tamin’ity raharaha ity. Tsiahivina fa ho an’Antananarivo fotsiny io voalaza io fa ny any amin’ny faritra mbola tsy fantatra. Ary tsy ny mpiray vodirindrina ihany no tratra manolana ireo zazavavy fa misy koa ireo sakaiza mihitsy no mahavanon-doza. Fa misy koa ireo havana akaiky ihany. Toa ny fitantaran’ity raim-pianakaviana ( R.R.) ity, izay tsy iza fa ny rahalahiny am-panambadiana ihany no nahavanona nanolana ny zanany. “17 taona ny zanako. Tsy dia salama saina tsara izy io ary tsy vitan’izany fa misy fanintona ihany koa. Rehefa mihetsika io aretin’io dia tsy mahita tory izy raha tsy mahazo fanafody. Nandritra izany no nohararaotin’ny rahalahiko am-panambadiana. Nisy ra mantsy teo amin’ny fandriana natoriany tamin’io ka nanaitra anay izany satria vao vita kelikely ny fandim-bolany. Nentina tamin’ny hopitaly avy hatrany ka tany no nilaza fa nisy nanolana ny zanako. Ny 19 Janoary teo no nitranga izany fa izao vao fantatray rehefa nohadihadiana tsara ilay zaza.”